Fan Wall - ukuphila kweqiniso ukushisa
Ngo ifulethi noma ehhovisi ngesikhathi sokushisa nehlobo ukushisa uzokusindisa udonga fan. It unamathele odongeni futhi kuthatha isikhala okuncane kakhulu, okuyinto inzuzo yayo undoubted. Kulokhu, udonga abalandeli, ngisho ngenkathi umoya isimo futhi humidifiers athandwa kakhulu ngoba kukhona lula ukuyisebenzisa futhi izindleko zabo kwamukelekile ukuba izingxenye ezahlukene sabantu.
Njengoba leli gama lisikisela, uphahla gwedla fan lihlukile phansi futhi itafula indlela ukufakwa kwakhe - kuxhunywe odongeni. Lokhu okuhlukile kuyinto ngokufanele uyakufanelekela ukuba labo amakamelo lapho phansi noma etafuleni Asikho isikhala esanele for idivayisi yeselula. Nge ukufakwa kwalo ukusingatha ngisho imfundamakhwela, njengoba kudinga nje entabeni ekhethekile nezikulufi ezimbili self-evunyelwe. On onjani ukuphakama hang odongeni fan, unquma. Amandla akhe impela high, futhi izindwani ayafana emhlabathini, futhi ngenxa yalokho yisiphi isimo lapho uzokwazi kuphole ngisho emagumbini ezikude kakhulu endlini. Futhi, fan, okuyinto ogibele odongeni, Ubuye imisebenzi pivoting zokusabalalisa elikhulu emoyeni notshwala. Futhi uma kuyoba kudingekile ukuba ngithume fan ngokuqinile indlela ethile, uyoba nethuba, ngoba ukukhetha ukulungisa isiqondiso. Ukuze kube lula ukusebenza, ngamunye fan n ezifana nalezi zinikezwa uhlobo oluthile elawulwa kude, ngalo kungenziwa zicinywe, ukushintsha isiqondiso salo futhi ukwandisa noma ukunciphisa Blower amandla.
Ukusuka lapho, e iliphi igumbi udonga fan, kuzoya ukusebenza okudingekayo yomsebenzi wakhe. Okunqumayo inani ophethe imizuzu ayisithupha emoyeni cubic metres futhi endaweni lapho kulelokamelo. Kumele kukhunjulwe ukuthi, isibonelo, ekhishini noma yokugezela uzodinga fan onamandla ngaphezu egumbini lokuphumula.
Fan umsindo - futhi iphuzu elibalulekile lapho d bilan okufanele azibheke uma uthenga. Kulokhu, khumbula ukuthi namandla kakhulu odongeni fan, ngisho nakakhulu-ke azosebenza. Lena, mhlawumbe, kuphela bikho wabo, okuyinto nje udinga ukwamukela. Uma udinga kuphole ekamelweni ngesikhathi sokulala, umane owanquma isivinini fan ubuncane, ke umsindo ngeke zibangele noma iyiphi ukungakhululeki ebusuku. onobuhle yakamuva kakhulu abakhiqizi seziqale ukufaka izinjini ezintsha ihlaba umkhosi umsindo kancane kakhulu, uwafake ezimweni ezikhethekile, labo abazokwazi iyavuleka umsindo.
Ngakho, ngasogangeni izinzuzo Blower zihlanganisa:
Ukubeka odongeni, ngaleyo ndlela esindisa isikhala phezu kwedeski noma phansi.
Intengo ephansi yezintaba mobile air conditioning ne humidifiers yesimanje.
Isilawuli kude ne akude.
umkhiqizo High, okuvumela emoyeni obandayo ngisho ikamelo elikhulu kakhulu.
Phakathi amaphutha kungathiwa elandelayo:
Isidingo odongeni obandayo.
Ngenxa umsindo operation amandla aphezulu.
Nokho, amaphutha ayo zingaphezu izinzuzo ukugqagqana eziningi, kodwa ngenxa Wall abalandeli mahle zokuhlala, kanye namahhovisi.
Nojosaka Hama: ukubuyekezwa. izikhwama School Hama
Spectacle izilungiso - kuyini? izibuko: izici jikelele, incazelo, zilwane, izithombe
Indlela yokwenza embonweni wasebusuku amagogolo?
9 izindlela zingakulahlekeli okhiye, isikhwama kanye nefoni
KumaKatolika Orthodox - lokholo futhi umhlobiso
Kuqondile Siding: izici lobuchwepheshe, izinzuzo kanye namathuba
Augustine waseHippo: ukuphila, imisebenzi emikhulu kanye nethonya layo ekuthuthukiseni scholasticism
Indlela ukususa ukunkenketha ekhaya - iseluleko
Kanjani ukuqala impilo entsha futhi ukushintsha ngokwabo: iseluleko ngokwengqondo. Kanjani ukuqala ukuphila okusha nge azikhohlwe ngokuphelele izono zethu?
Household izihlungi "Geyser Bio": tesakhiwo kanye nokubuyekeza amakhasimende
Yini elindele kimi esikhathini esizayo esiseduze? Izindlela zokukhokha ezikhona ngokukhiqiza impendulo ecacile
Singakwazi yini ukuthinta ubusika nqabela isitshalo seqanda, nokuthi ungasebenzisa kanjani-ke?
Indlela yokwahlukanisa ubuhlungu be-bronchitis kusuka ku-pneumonia ekhaya?
Kungani futhi kanjani guys namantombazane nomona?
Indlela ukupheka dinner okumnandi ngomyeni wakhe
Imfashini kakhulu Summer izingubo 2011
Amatshe Red: igama. amagugu Red